Taxi မောင်းသမား နဲ့ ကျွန်တော် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Society & Lifestyle » Taxi မောင်းသမား နဲ့ ကျွန်တော်
Taxi မောင်းသမား နဲ့ ကျွန်တော်
Posted by ခင္ခ on Jul 13, 2012 in Society & Lifestyle | 21 comments
အရင်လက ရန်ကုန်မှာနေတဲ့ အမေအိမ်မှာ ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်၊ဘုန်းကြီးဆွမ်းကြွေးမယ် သားတို့ အချိန်ပေးနိုင်ရင်လာခဲ့စေချင်တယ်လို့ ဖုန်းဆက်ပြောတာနဲ့ စနေနေ့ည ၈ နာရီထွက်တဲ့ မန္တလေး-ရန်ကုန် အဝေးပြေးကားစီးပြီး ရန်ကုန်သို့ချီတက်ခဲ့ရပါတယ်။ နောက်နေ့မနက် ၅း၄ဝ နာရီ ဝန်းကျင်လောက်မှာ ရန်ကုန်မြို့၊ အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးဂိတ်ဝင်းထဲကို ဝင်ရောက်ဖို့ကျွန်တော်စီး လာတဲ့အဝေးပြေးကားက ရှေ့ကကားတွေလိုဘဲ ကားဝင်းထဲဝင်မဲ့မျိုးစုံသောကားတန်းမှာ တန်းစီရင်ဖြေးဖြေး လိမ့်နေတာမို့ ဒီဂိတ်ဝမှာဘဲ ဆင်းရင်ရပါလား ယာဉ်နောက်လိုက် စပယ်ယာ လေးကိုမေးတော့ အကိုကားဝမ်းပိုက်ထဲမှာပစ္စည်းထုတ်ဖို့ပါသေးလား မပါရင်တော့ရပါတယ်မို့ ကိုယ့်ခရီးဆောင်လက်ဆွဲ အိတ်လေးဆွဲပြီးဆင်းခဲ့ပါတယ်။
ပြီးတော့ လမ်းဘေးလေးရပ်နေပြီး Taxi ဌားဖို့စောင့်နေတုံး၊ အဌားကားလေးတစ်စီးလာတာနဲ့ လက်လေးတားလိုက်တော့ အဌားကားလေးက ကျွန်တော့နားမှာရပ်ရင်း Taxi မောင်းတဲ့သူက
ယာဉ်မောင်း – အကိုဘယ်သွားမလဲ
ကျွန်တော် – ကမာရွတ်၊လှည်းတန်းလမ်းဆုံကို
ယာဉ်မောင်း – ၆၀၀ဝ ကျမယ်
ကျွန်တော် – ညီလေးရယ် ကိုယ်ခဏခဏဌားစီးနေကျပါ ၄၀၀ဝ မရဘူးလား
ယာဉ်မောင်း – မရဘူးအကိုရာ ၅၀၀ဝ တော့ပေးလိုက်ပါ
ကျွန်တော် – ၄၀၀ဝ နဲ့လိုက်နိုင်လည်းသွားမယ်ကွာ၊ မရလည်းနောက်အစီးဌားရုံပေါ့
ယာဉ်မောင်း – ဒါဆိုလည်း ၄၀၀ဝ နဲ့ပို့ပေးမယ်၊ လမ်းကျုံရရင်တော့ တင်မယ်နော်၊
ကျွန်တော် – ရပါတယ်၊သဘောပါ
လို့ပြောပြီး အဌားလိုက်မယ့်ဈေးတဲ့သွားတာနဲ့ ယာဉ်မောင်းဘေးရှေ့က ဝင်ထိုင်လိုက်တာပေါ့။ ကျွန်တော်လည်းထိုင်ပြီး တံခါးပိတ်ပြီတာနဲ့ ကားစထွက်ခါစဘဲရှိသေးတယ် သားအဖဖြစ်ဟန်တူတဲ့ လူကြီးတစ်ဦးနဲ့ ၁၅နှစ်အရွယ်လောက် ကလေးတစ်ဦး ခရီးဆောင်လက်ဆွဲအိတ်(၂)လုံး၊ ခြင်တောင်း(၃)ခုနဲ့ ကျွန်တော်စီးလာတဲ့ အဌားကားကို လက်တားလို့ ကားလေးကသူတို့နားမှာ ရပ်ပြီးတော့ ယာဉ်မောင်းသူကထုံးစံအတိုင်း ဘယ်သွားချင်ပါလဲ စမေးပါရော-
လူကြီး – ၈မိုင်က စွယ်တော်နားကဆိုတဲ့ ဘုန်းကြီးတက္ကသိုလ်သွားချင်တာပါ
ယာဉ်မောင်း – အဲဒီကိုဆို ၈၀၀ဝ ကျမယ်
လူကြီး – မများဘူးလားငါ့တူရာ၊ ၅၀၀ဝ လောက်မရဘူးလား
ယာဉ်မောင်း – ကျွန်တော်ကလမ်းကြုံတာမဟုတ်ဘူး၊ ဦးတို့ အထုပ်ပိုးတွေနဲ့မို့ သနားလို့ ဦးတို့ကို အရင်လှည့်ပို့ပေးမှာ၊ ကားတွေကဒီအချိန်ဆိုပြုံပြီးဆိုက်တော့ ဦးတို့သွားမယ့်ဆီက သီးခြားဝင်ပေး ရမှာ ဘယ်ကားမှတော်ရုံလိုက်မှာမဟုတ်ဘူး၊ ဒီလိုလုပ်ဗျာ ၆၀၀ဝ တော့ပေးလိုက် လာ လာ လာ
ဆိုပြီးသူကားပေါ်ကဆင်းလို့ အထုပ်အပိုးတွေကို နောက်ခန်းထဲဖွင့်တင်ရင်း ဥိးတို့ကားပေါ် တက်လေ ဆိုတော့ ခရီးသည်သားအဖလည်းဘာမှပြောချိန်တောင်မရလိုက်ဘဲ ကားပေါ်ရောက်လာ ခဲ့တယ် လေ။ ပြီးတော့ကားလေးစထွက်လာတာပေါ့။ ကျွန်တော်မှာပြောချင်လိုက်တာ ပါးစပ်ယား နေပေမဲ့ သူများစီပွားမို့ပြောကောင်း မကောင်းစဉ်းစားနေတာရယ်၊ ခရီးသွားသားအဖလည်း ကားပေါ်ပါလာ နေတာရယ်ကြောင့် ပါးစပ်လေးပိတ်ပြီးနေနေတုံး ၈မိုင်စွယ်တော်ရှေ့ရောက်လို့ ကားလေးရပ် ပစ္စည်းတွေချပေးလုပ်ပြီးတော့ လူကြီးဖြစ်သူက ကျသင့်တဲ့ပိုက်ဆံလေးပေးရင်နဲ့ ဦးတို့ကိုအရင် ပို့ပေးတဲ့ငါတူရယ် အရင်လိုက်ပို့တာကို သဘောကောင်းတဲ့ကားပေါ်က ခရီးသွားငါ့တူကြီးရယ် ကျေးဇူးပါဗျာ ဘုန်းကြီးကြပါစေ သက်ရှည်ကြပါစေလို့ ဆုတောင် တောင်းပေးလေရဲ့။ ကျွန်တော်ကိုပို့ဖို့ ကားလေးစထွက်တယ်ဆိုတာနဲ့ မနေနိုင်တော့တာမို့-
ကျွန်တော် – ငါ့ညီကလည်း အတော်နောက်တဲ့သူဗျာ ကျွန်တော်ကားပေါ်ရောက်လို့ ငါ့ညီကားက မြောက်ဥက္ကလာလမ်းဘက်က ဦးတည်မောင်းမှတော့ အဲဒီစွယ်တော်ရှေ့ကနေ ၈မိုင်ကိုဖြတ်ထွက်မှာ ဘဲလေ၊ ကိုယ်သွားမဲ့လမ်းကြောအတိ်ုင်းဘဲ ဆီလည်းပိုကုန်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ မတန်တဆတောင်းရ တယ်ဗျာ
ယာဉ်မောင်း – အကိုကလည်း အခုနောက်ပိုင်း အဌားကားတွေကသိပ်မကိုက်ဖူးဗျ ဒါတောင်ဒီမနက် မိုးမရွာလို့နော် မိုးရွာရင်ငုတ်တုတ်မေ့ရော မခုလို အချဉ်လေး ဘာလေးတွေ့တုံး ရှာထားမှဗျ။
ကျွန်တော် – ရှာတာတော့ဟုတ်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ အကိုဟာက နှစ်ဆလောက်နှိပ်လိုက်တာလေ
ယာဉ်မောင်း – အကိုကလည်း
ဆိုပြီးတော့ သူလည်းဘာမှဆက်မပြောတော့သလို ကျွန်တော်လည်းဘာပြောရမှန်းတောင်မသိလို့ စီးလာရင်း ပြည်လမ်း ၆မိုင်ခွဲလောက်မှာ ကားနောက်ဘီးက ဖေါင်း ဆိုတဲ့အသံနဲ့အတူ ဘီးပေါက်ပါ လေရောဗျာ။ ဒါနဲ့ အဌားကားမောင်းသူက အကိုခဏလေးပါ ဘီးလေးလဲလိုက်အုံးမယ်ပြောပြီး ကားပေါ်ကားဆင်း ဘီးလဲပေါ့၊ ကျွန်တော်လည်းကားပေါ်ကခဏဆင်းပြီး သူဘီးလဲတာကို ကြည့်နေမိ တယ်လေ။ သူကဘီးလဲရင်းနဲ့ ပေါက်တဲ့ဘီးမှာ စူးဝင်နေတဲ့သံချောင်းကို စမ်းမိရင်း ညဉ်းတွားလိုက်တယ် ဒီသံကလည်း ဒီကားကျမှဘဲစူးရတယ် ရှေ့မှာဦးတဟို သွားနေတဲ့ ကားတွေကိုစူးပါလား ဒီဘီးရဲ့ကျွတ်ပေါက်ဖာထား တာက ၄-၅ပေါက်မကတော့ ဒီတစ်ခါ ကျွတ်ပါလဲရပြီနဲ့တူတယ်ဗျာ ခုနရထားတဲ့ ၆၀၀ဝ တော့ ပလုံတော့မှာဘဲဗျာလို့ ပြောရင်း ဘီးလဲတာလုပ်နေတာပေါ့။ ကျွန်တော်ကတော့ဘာမှမပြော ဖြစ်ပါဘူး၊ ဘီးလဲပြီးဆက်ထွက်လာတာ ကျွန်တော်ဆင်းမဲ့လှည်းတန်းမီပွိုင့်နားက အနော်ရထာအိမ်ယာဝင်းအပေါက် အကျော်မှာ ကားလေး ရပ် ကားပေါ်ကဆင်းပြီး ပိုက်ဆံထုတ်ပေးရင်းနဲ့ သံ ကလည်းအချဉ်ကားတစ်စီတော့လာပြီ၊ ထိုးစိုက်လိုက်အုံးမှလို့များ စိုက်လိုက်တာများမသိတာဗျာ ပြောတော့ အဌားယာဉ်မောင်းသမား လည်း ကားစက်နိုးပြီး အရှိန်လေးတင်ကထွက်သွားပါရောဗျာ။
ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုံးက အဖိုးပြောဖူးတာရှိတယ် သူများဆီကမတရားယူတဲ့ပစ္စည်းတွေ၊ ပိုက်ဆံတွေကအဖတ်မတင်ဘူးငါ့မြေးရ တစ်နည်းနည်းနဲ့တော ့ပြန်ကုန်တာမို့ ကိုယ်မတရား ယူတယ်ဆိုတဲ့နံမည်ပျက်ဘဲရတာ အဖတ်တင်တယ်—တဲ့။ အဲဒါများဟုတ်နေတာလား။
စေတနာသည် ကံမည်၏ ဆိုသလို Taxi မောင်းသမားက အကယ်လို့များ ခရီးသွားသား အဖ (၂)ယောက်ကို စေတနာမှန်နဲ့တန်ရာတန်ကြေးယူပြီးပို့ပေးခဲ့ရင် ဘီးထဲစူးဝင်သွားတဲ့သံက သူပြော သလို ဒီလမ်းပေါ် ဥတဟိုသွားနေတဲ့ကားတွေလို လွှတ်သွားနိုင်မလား၊ အခုတော့ စေတနာ ထက် အသပြာအတွက်နားမလည်ရှာတဲ့ သူတွေအပေါ် ပိုရအောင်ဟုတ်တာရောမဟုတ်တာရောပြောပြီး အမှီးကျက်အမှီးစား ခေါင်းကျက်ခေါင်းစားဆိုသလို စေတနာမမှန်တော့ ကံလည်းမမှန်တာ တွေကြုံ ရတာလားတွေးရင် အမေတိုက်ခန်းလှေကားပေါ်လှမ်းတက်နေမိပါတယ်။
ဟုတ်တယ်နော် ကားသမားတွေကလဲ မသိရင်ပိုတောင်းချင်တယ်
ပုဂံကနေရန်ကုန်ကို နှစ်ဆန်းနှစ်ရက်နေ့ ပြန်အရောက်မှာ
အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးဂိတ်ကနေ မြေနီကုန်းကို Taxi ငှားတာ
အဲဒါနဲ့ Taxi ကြီးကြပ်ရေးရုံးခန်းကိုသွားပြီး ပြောတော့
သူတို့ငှားပေးမှ လေးထောင်ငါးရာနဲ့ လိုက်ပို့ပေးတယ်
“ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုံးက အဖိုးပြောဖူးတာရှိတယ် သူများဆီကမတရားယူတဲ့ပစ္စည်းတွေ၊ ပိုက်ဆံတွေကအဖတ်မတင်ဘူးငါ့မြေးရေ တစ်နည်းနည်းနဲ့တော ့ပြန်ကုန်တာမို့ ကိုယ်မတရား ယူတယ်ဆိုတဲ့နံမည်ပျက်ဘဲရတာ အဖတ်တင်တယ်—တဲ့။” ကောင်းလိုက်တဲ့စကား ကိုခင်ခရေ အပြည့်အဝ ထောက်ခံပါတယ်။
အဝေးပြေးဂိတ်ကနေ လှည်းတန်းသွားမှာ စွယ်တော်ကို လမ်းမသင်.ဖူးလို. ပြောရဲတဲ.သတ္တိက မသေးဘူးနော်။
ကိုခင်ခရေ ……. ပူပူနွေးနွေးအကြောင်းလေးပြောချင်လို့ ၈ ရက်နေ့အလှူပြီးတော့ အင်ယားကန်ဘက်ကို တူရတို့နဲ့အတူ တက်ကဆီဌားကြတယ်လေ ကိုအမတ်မင်းက ငှားပေးတယ် ၂၅၀ဝ နဲ့ပေ့ါ ….. ကန်ဘောင်ရောက်တော့ တူရက တစ်ထောင်ထုတ်ပေးတယ် အခိုင်က သမီးလေးကိုချီပြီးအရင်အောက်ဆင်း ခဲ့တယ် … အမျိုးသားကကျန်ခဲ့ပြီးကားခရှင်းပေးနေတယ်လေ ကျွန်မတို့လည်း နောက်ကားနဲ့ပါမယ့်သူတွေ ကိုစောင့်နေတာပေ့ါ တက္ကဆီသမားကမသွားသေးတော့ အားလုံးကိုမေးမိတယ် ဟေ့ကားသမား မသွားသေးဘူး ဘာလို့စောင့်နေတာလဲမသိဘူးလို့ပေ့ါ အမျိုးသားလဲ ပစ္စည်းတွေဟိုယူဒီသယ် အလုပ်များနေတုန်း ကားကထွက်သွားတယ် သူကအဲဒီအခါမှ ဟာကားခကို ၅၀၀ဝ တန်ပေးထားတယ် ပြန်မအမ်းဘူး ကားသမားထွက်သွားတယ် ကျွန်မလည်း အတော့်ကိုဒေါသ ထွက်သွားမိတယ် ဒါနဲ့ကားတိုက်ပါစေလို့ ကျိန်ဆဲပေးလိုက်တယ် …… ကျွန်မကားငှားတိုင်း တန်ရာတန်ကြေး ပေးငှားတယ် ဘယ်တော့မှ လူပိုအတင်မခံဘူး တစ်ခါအောင်မင်္ဂလာဂိတ်ကနေ တက္ကဆီကို ငှားတော့ ကျွန်မတို့တက်ပြီးမှ နောက်လူထပ်ခေါ်တော့ ချက်ချင်းကားပေါ်ကကျွန်မတို့ဆင်းမယ်လုပ်မှ ကားသမားကထွက်တယ် လမ်းမှာတော့ လူပိုမတင်ရတော့ ကျွန်မတို့ကိုပညာပြပြီး အတင်းမောင်းလေရဲ့ ….. ကျွန်မကပြောမယ်ကြံတော့ အမျိုးသားက လက်တို့တယ် ကားတိုက်ရင် သူကကိုယ့်ထက်ပိုနစ်နာမှာတဲ့ သွားမပြောနဲ့တဲ့လေ ….
ဘာပဲပြောပြော ဒီနေ့တော့ အုံနာခ အတော်ကိုက်သွားလို့ အစ်ကိုတို့ကို ပို့ပြီးရင် အိမ်ပြန်အိပ်တော့မယ်ဗျာ…..
အဝေးပြေးဂိတ်ကနေ လှည်းတန်းသွားမှာ စွယ်တော်ကို လမ်းမသင်.ဖူးလို. ပြောရဲတဲ.သတ္တိက မသေးဘူးနော်။ Ster ရေ ကျွန်တော်ကြုံခဲ့တဲ့ သားအဖက ရန်ကုန်ကိုလည်လည်ဝယ်ဝယ် ရောက်ဖူးမယ်မထင်ဘူး သူတို့သွားတာစွယ်တော်ရှေ့က ဘုန်းကြီးတက္ကသိုလ်လို့ပြောတော့ နယ်ဘုန်းတော်ကြီးတွေ အဲဒီမှာကျောင်းတက်တာဆီလာတာလည်းဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ ဒါကြောင့် သူပြောတာကို အဲဒီသားအဖကပြန်မပြောနိုင်တာနေမှာပေါ့ ဆုတောင်ပေးသွားသေးတာဘဲကြည့်လေ။
အဲဒီလို မသိတဲ.လူတွေကို မျက်နှာပြောင်တိုက် လိမ်ရဲတဲ. လူမျိုးတွေကတော. အံ.ဩဖို.ကောင်းပါတယ် ko khin kha ရေ။
နောက်ပိုင်း ရန်ကုန်က တက်စီသမားအချို့က
ကိုခင်ခ ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲ ..
သူတို့ပြောနဲ့ ဈေးနဲ့မရရင် လျော့တော့ပေးတယ်
ဒါပေမယ့် လိုက်ရင် ထပ်တင်မယ်လို့ ပြောတယ်ဗျ …
သူတို့ကို ခပ်တည်တည်နဲ့ တွယ်နိုင်မှ တန်ကာကျတာကလား …
ကြုံရဆုံရ ဘုံဘဝမှာ လူအမျိုးမျိုးစိတ်အထွေထွေတွေ့ကြရတာပါပဲ…
Taxi စီးမယ်ဆိုရင် ပထမဆုံး တားရမယ်။ နောက်ပြီး သွားချင်တဲ့နေရာပြော ဈေးညှိရအုန်းမယ်။ ချက်ချင်း ရပ်ပေး တက်ထိုင် ထွက် လုပ်လို့မရဘူး။ အဲ့မှာတင် ၃ မိနစ်လောက်ကြာသွားပြီ။ တစ်ချို့ကားသမားက ညီလေးဘယ်လောက်ပေးမှာလဲ အစ်ပြီးကိုယ့်ကိုတော့ ဈေးပြောခိုင်းတဲ့ကောင်ကရှိသေးတယ်။
အစိုးရက Meter တော့တပ်ခိုင်းထားတယ်။ Meter နဲ့ပိုက်ဆံယူကြအောင်တော့မလုပ်ဘူး။ အဲ့တော့ ဘာလုပ် ဖို့ Meter တွေတပ်ခိုင်းတယ်တော့မပြေတပ် (သူ့အမျိုးတွေ ထော အောင်ထင်တယ်)။ ဒီကိစ္စတွေ က Meter နဲ့ကောက်ရင် အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်ထင်တယ်။
ဖိုးသူတော် စာ ဖိုးသူတော် ဖတ်တတ်ဆိုသလို
ရန်ကုန်တက္ကစီသမား ကို ရန်ကုန်မြို ့သူား များသာ နိုင်ကြလေအိ ။
နယ်မှလာသမျှ ၊ မလယ်မဝယ် အကြောင်းမသိသူများအားလုံး ချစ်ဖားဖြစ်ကုန်လေသတည်း။
မမနိုရာနဲ့မမေချိုတို့ရေ။… ။ ကားသမားတွေ ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းနဲ့တော့ အားလုံးကိုသိမ်းမကြုံးပါနဲ့လား။
အရာရာတိုင်းမှာ အကောင်းနဲ့အဆိုးဟာ အမြဲဒွန်တွဲနေတာပဲမဟုတ်လား။
ကျွန်တော်taxiမောင်းတုန်းက ကျွန်တော့်ကားနဲ့ကြုံတဲ့သူတွေက်ို အတတ်နိုင်ဆုံး၊ အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးခဲ့တာချည်းပါဘဲ။ မှတ်ချက်။ ။ ငဖတ်တွေတော့ မပါ ပါ။
အများသူငှာအတွက် ဖတ်ရှု ဆင်ခြင်စရာ အတွေးပေးနိုင်တဲ့ စာလေးတစ်ပုဒ်ပါ။ လူအချင်းချင်း လှည့်ပတ်ခြင်း ကင်းဝေးကြပါစေလို့ ဆုတောင်းရမှာပါပဲ။ လူတိုင်းအသိတရားလေးရှိ၊ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ကလေး ရှိကြရင် လောကကြီး သိပ်သာယာမှာပါ။
ဘယ်အရာမဆို ဖျံကျတာ၊ လူလည်ကျတာ တော့ မကောင်းဘူးနော်၊ စီးပွားရှာတယ်ဆိုပေမယ့် မတရားစီးပွားရှာသလို ဖြစ်နေရင် လုံးဝကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။
ပန်နီထဲက ရေ ပန်နီထဲသွားတယ် ဆိုလားပဲ
Taxi သမားတွေဘဝကလည်း ကားဈေးတွေကျပေမဲ့ အုံနာကြေးမလျှော့သေးတဲ့ အုံနာအတွက် ၊ မိသားစု ဝမ်းရေးအတွက် နေ့စဉ် ထောင်နှုတ်ခမ်းလမ်းလျှောက် ( သူမှားမှား ကိုယ်မှားမှား တစ်နေ့နေ့ လူတစ်ယောက်ကို တိုက်မိပြီဆိုတာနဲ့ ထောင်ထဲရောက်ဖို့ သေချာသလောက် ) အချိန်ကုန်လို့အိမ်ပြန်ရောက်မှပဲ ရင်အေးကြရတဲ့ဘဝတွေ လည်းရှိကြပါတယ်..။